Mobile Phone UV Sterilizer RL-LF21 – Remax Online Shop
Mobile Phone UV Sterilizer RL-LF21
Mask တပ် , လက်သန့်ဆေးတွေလဲသုံးပေမယ့်
ဖုန်း နဲ့ နာရီ လို ပစ္စည်းတွေက ပိုးမွှားကင်းစင်ဖို့ စိတ်ချရရဲ့လား ?
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ REMAX ဘက်စုံသုံးပိုးသတ်စက် RL-LF21 နဲ့သာဆို လုံးဝ စိတ်ချလိုက်တော့နော်..
ဖုန်း ၊ နားကြပ် ၊ ကျန်းမာရေးသုံး Mask ၊
သော့ အစရှိတဲ့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကို
ဘက်တီးရီးယား ၊ ရောဂါပိုးများမှ ကင်းဝေးစေပြီး
ပိုးသတ်ဗူး အဖုံးမှာ Sensor ပါတော့
ဗူးအဖုံး ဖွင့်လိုက်ရင် UV မီးများ အလိုလျောက် ပိတ်ပေးနိုင်တော့ မျက်လုံး မထိအောင် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်တာပေါ့..
ဓာတ်ရောင်ခြည် ၊အပိုင်းအစ ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေလဲမရှိတော့
(၅) မိနစ် ပိုးသတ်ပေးရုံနဲ့ (၉၉.၉၉%) ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်ပြီး
(၅မိနစ်) (၁၀မိနစ်) စသည်ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက်
ဖုန်းအားသွင်းကြိုး တပ်သုံးရတဲ့ အမျိုးအစားဆိုတော့
Power Bank နဲ့ သုံးမလား/ အားသွင်းခေါင်း နဲ့ သုံးမလား.
အထူးစျေးနှုန်း - ၂၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ